IATA: Nsogbu njikọ ikuku nke mba niile na-eyi egwu iweghachi akụ na ụba ụwa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » IATA: Nsogbu njikọ ikuku nke mba niile na-eyi egwu iweghachi akụ na ụba ụwa
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) wepụtara data na-ekpughe na nsogbu COVID-19 nwere mmetụta na-emebi ihe na njikọta mba ụwa, na-eme ka ọnọdụ nke obodo ndị ejikọrọ na ụwa jupụta.
London, obodo kachasị nwee njikọ kachasị na ụwa na Septemba 2019, ahụla 67% ida na njikọta. Ka ọ na-erule Septemba 2020, ọ dara asatọ.
Shanghai bụzi obodo kachasị elu maka njikọta ya na obodo anọ kachasị nwee njikọ niile na China-Shanghai, Beijing, Guangzhou na Chengdu.
New York (-66% daa na njikọta), Tokyo (-65%), Bangkok (-81%), Hong Kong (-81%) na Seoul (-69%) niile apụọla na iri kacha elu.
Nnyocha ahụ na-ekpughe na obodo ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke njikọ ụlọ na-achị ugbu a, na-egosi ókè njikọ mba ụwa mechiri.
Ịnye Sep-19 Sep-20
“Mgbanwe dị egwu na njikota njikọta na-egosi etu e siri nyeghachi njikọ ụwa n’oge ọnwa gara aga. Mana ihe dị mkpa bụ na ọkwa adịghị agbanwe agbanwe n'ihi mmelite ọ bụla na njikọta. Nke ahụ dara n'ozuzu na ahịa niile. Ebubo gbanwere n'ihi na ogo ọdịda a karịrị maka ụfọdụ obodo karịa ndị ọzọ. Enweghị ndị mmeri, naanị ụfọdụ ndị egwuregwu merụrụ ahụ obere. N'ime oge dị mkpirikpi anyị agbanweela otu narị afọ nke ọganihu n'ijikọta ndị mmadụ na ijikọ ahịa. Ozi anyị ga - ewe n ’ọmụmụ a bụ mkpa ọ dị mkpa iji wughachi netwọkụ ụgbọelu n’uwa niile,” ka Sebastian Mikosz kwuru, Onye isi osote onye isi oche IATA maka ndị otu na-ahụ maka mpụga ndị otu.
IATA Nzukọ Asaa nke Iri Asaa na Iri Na isii kpọkuo ndị gọọmentị ka ha meghee ókèala ha n’enweghị nsogbu. “Usoro nhazi nke ndị njem bụ ihe ga-eme ozugbo iji wughachi njikọta anyị tufuru. Teknụzụ dị. E mepụtara ntuziaka maka itinye n'ọrụ. Mikosz kwuru, "Ugbu a, anyị kwesịrị itinye n'ọrụ, tupu mmebi emebi na netwọọdụ njem ụgbọ elu mba ụwa agaghị agbanwe agbanwe."
Transportgbọ njem ikuku bụ nnukwu injin nke akụ na ụba ụwa. N'oge nkịtị ụfọdụ ọrụ 88 na $ dolla 3.5 na GDP na-akwado site na ụgbọelu. Ihe kariri ọkara nke ọrụ a na uru akụ na ụba nọ n'ihe egwu site na ọdịda n'ọchịchọ njem ụgbọ elu ụwa. “Ndị gọọmentị ga-amata na e nwere nnukwu nsogbu na-esi na ndụ na ibi ndụ ndị mmadụ. Ọ dịkarịa ala ọrụ 46 nke ụgbọ njem ụgbọelu na-akwado nọ n'ihe ize ndụ. Ike nke mgbake akụ na ụba site na COVID-19 ga-emebi oke na enweghị nkwado nke netwọọdụ ikuku na-arụ ọrụ, ”ka Mikosz kwuru.
Ntinye aka nke ikuku ikuku nke IATA n’etinye uzo obodo obodo jikotara n’obodo ndi ozo n’uwa nile, nke di nkpa banyere ahia, njem nleta, itinye ego na ihe ndi ozo. Ọ bụ usoro jikọrọ ọnụ na-egosi ọnụọgụ oche ole na-aga ebe a na-eje ozi site na ọdụ ụgbọ elu ndị isi mba na mkpa akụ na ụba nke ebe ndị ahụ.
COVID-19 na-emetụta na njikọta site na mpaghara (Eprel 2019-Eprel 2020, ọnụọgụ Njikọta IATA)
Africa tara ahụhụ 93% na njikọta. Etiopia jisiri ike gboo omume a. N'ime mbido mbụ nke ọrịa a na Eprel 2020, Etiopia jigidere njikọ yana mba 88. Ọtụtụ ahịa ụgbọelu na-adabere na njem, dịka Egypt, South Africa na Morocco, metụtara oke mmetụta.
Asia-Pacific hụrụ 76% ida na njikọta. Ahịa ụgbọ elu siri ike nke ụlọ, dịka China, Japan na South Korea rụpụtara nke ọma n'etiti mba ndị jikọtara na mpaghara. N’agbanyeghi oke ahia nke ugbo elu nke ugbo elu, Thailand nwere oke nsogbu ikekwe n’ihi na mba ahu tukwasiri obi n’elu njem nleta ndi mba ozo.
Europe enweta 93% ọdịda na njikọta. Mba ndị dị na Europe hụrụ nbelata dị mkpa n'ọtụtụ ahịa, ọ bụ ezie na njikọta ejidere Russia karịa mba ndị ọdịda anyanwụ Europe.
Middle East mba hụrụ njikọ jikọtara 88%. Ewezuga Qatar, njikọ njikọta belata karịa 85% maka mba ise jikọtara ọnụ na mpaghara. N'agbanyeghị mmechi oke, Qatar kwere ka ndị njem na-agafe n'etiti ụgbọ elu. Ọ bụkwa ebe dị mkpa maka ụgbọ mmiri.
North America njikọta jụrụ 73%. Njikọ Canada (-85% ojuju) kụrụ njọ karịa United States (-72%). Na nkebi, nke a na-egosipụta nnukwu ụgbọ elu ụgbọ elu nke ụlọ na United States, n'agbanyeghị agbanyeghị mbelata njem buru ibu, na-aga n'ihu na-akwado njikọta.
Latin America ahụhụ 91% daa na njikọta. Mexico na Chile rụrụ obere ọrụ karịa mba ndị ọzọ jikọtara ọnụ, ikekwe n'ihi oge mkpọchi ụlọ na mba ndị a na otu esi agbaso ha.
Tupu ọrịa a na-efe efe
Tupu ọrịa ọgbụgba COVID-19, uto nke njikọ ikuku bụ akụkọ ihe ịga nke ọma zuru ụwa ọnụ. N'ime iri afọ abụọ gara aga, ọnụ ọgụgụ obodo ndị ejiri ikuku (njikọ obodo na obodo jikọọ) ihe karịrị okpukpu abụọ karịa n'otu oge ahụ, ọnụ ahịa njem ụgbọ elu jiri ọkara daa.
Mba iri kachasị jikọọ na ụwa kachasị hụ mmụba dị elu n'oge 2014-2019. United States nọgidere bụrụ mba jikọtara ọnụ, na uto nke 26%. China, na nke abụọ, toro njikọta site na 62%. Ndị ọzọ na-egosipụta ọfụma na iri kacha elu gụnyere India nke anọ (+ 89%) na ebe itoolu na Thailand (+ 62%).
Nnyocha nke IATA nyochara uru nke ijikọ ikuku elu. Nkwubi okwu doro anya bụ:
Njikọ dị mma n'etiti njikọta na arụpụta ihe. 10% ịrị elu na njikọta, n'ihe metụtara mba GDP, ga-eme ka nrụpụta ọrụ ọrụ rụpụta site na 0.07%.
Mmetụta a dị ukwuu maka mba ndị ka na-emepe emepe. Ulo oru mbo ikike nke ikuku na mba ebe njikota di ugbua pere mpe ga enwe mmetuta kariri na oru ha na oganihu ha karie ugo nke itinye ego na obodo mepere emepe
Enwee ike itinye ego na njem nlegharị anya iji mepụta akụ isi obodo. Transportgbọ njem ụgbọelu enyela aka na ohere ọrụ na uru akụ na ụba buru ibu site na nsonaazụ njem nlegharị anya, ọkachasị na steeti obere agwaetiti. Na akụnụba ahịa na-eto eto, enwere ike ịnwe ụkọ usoro, yabụ mmefu njem nwere ike mejupụta ọdịiche ahụ.
Ego ụtụ na-abawanye site na ọrụ ọrụ akụ na ụba. Njikọ ikuku na-eme ka ọrụ akụ na ụba na mmụba na mba nyere, nke nwere ike inwe mmetụta dị mma na ụtụ isi gọọmentị.
Ndepụta nke ebe ndị a na-emepe emepe na Bangkok n'ihi ...